Kya gajab lekhnu bhayechha Nepalean jee.........ramro lagyo.......आर्थिक बिकासमा नं १ हुन लागेकको भारतसंग जोरी खोजेर हैन जोडी बनेर नै हामी उंहो लाउन सक्छौ, यो धुर्व सत्य नै हो ..........
हाम्रो देश ले समग्र भारत को आर्थिक प्रगती बाट केही सिक्न सकेन । खाली बिहार को फोहोरी राजनीति सिवाय
नेपालयन जी तपाइँलाइ भ्रम भएछ । २०४७ को संविधान नेपाली जनताले चुनेर पठाएकाहरूले बनाएका होइनन् । त्यो त राजाको कोटको खल्तीबाट निकालेर पढेर सुनाएपछि जारी भएको थियो नेपालमा ।
अर्कोकुरा, भारतले नदबाएको भए हामीले दबिएको महसुस गर्ने नै थिएनोे । दबाउने र दबिनेबीच त दाजूभाइको होइन केवल साइनो रहन्छ मालिक र नोकरको मात्र । मेरो अर्थ पनि भारतीय सँग जोरी खोज्ने होइन तर कुनै भारतीयले तपाइँलाइ होच्याउन कै लागी पो यी प्रश्न गरिरहेका छन् की ?
नेपालमा चलेको जनयुद्ध विधिवत रूपमा अन्त्य भएको छ । समझदारी रूपमा यसरी युद्धको अन्त्य भएको विश्वमा कतै उदाहरण नै छैन । हामी अाफ्नै भाग्य (संविधान) लेख्ने तयारीमा छैँा । यो जति ठूलो कुरो के हुन सक्छ विश्वमा देखाउनको निम्ती । देशमा चलीरहेको संक्रमणकालीन अवस्थालाइ नकार्न सकिँदैन तर त्यो नै हाम्रो अन्त्य त होइन नि ।
नेपालयन जी अाशावादी हुनुहोस् , निराशाले जीवन चल्दैन न त चल्छ राष्ट्र नै ।
त्यो भारतीय लाई नेपाल को राजनीति बारेमा राम्रै जानकारी रहेछ । उस्को सोधाई बुझ्दा उस्ले जानी जानी खिस्याउदै अनी अन्त मा भारत कै जय होस् भन्यो भने तिमीहरु को पनि जय हुन्छ है भन्दै चेताबनी स्बरुप भने जस्तो पो लाग्यो । शूद को अ न्श परेको रहेछ मोरो त !
राजनीतिक हिसाब ले भारत को दाजु भाई नेपाली त हुनै सक्तैन ! गुलाम हुन सक्छ गुलाम !
उहिले ठाडै फ लामे सिक्री घाटिमा बाधेर गुलाम बनाउथे अब अहिले चाँही कागज को माध्यम बाट गुलाम बनाउछ्न ! फरक यती नै हो ।
नेपाली नेताहरु रुघा खोकी ला ग्दा पानी धारो लाएर भारत जाने र त्यही मौकामा भारतीय शासक हरु को धोती उचालेर पंखा हम्कने गरिरहुन्जेल सम्म हामी नेपाली को शिर ठाडो हुन पाउने छैन ।
तर पनि एक दिन त यि नेता हरु ले बाटो लाग्नु पर्छ नि , नेपाल आमाको गर्व-ग र्भ बाट असल -इमान्दार नेता हरु को जन्म नै नहुने त होइन नि !
जन्मी सकेका छन कि ! मा त्र समय ले अगाडि ल्याउन बाँकी होला !
निराश भ ई हाल्नु हुँदैन अहिले नै ।
फोस्रो क्रान्तिकारी राष्ट्रवादको डींग हाँकेर २१ औँ शताब्दिको नेपाल पार लाग्ने वाला छैन । नेपाल भारतबाट हेपिएको छ भन्ने मानसिकतामा खोट छ र दासताको दिमाग तिनै क्रान्तिकारीहरूको उपज हो जसले नेपालको राष्ट्रवाद भारत बिरोधबाट शुरू गरेर त्यहीँको चक्कर लगाएर पूरा गर्ने गरेका छन् । अति बिरोध र लाजलाग्दो समर्पणको गोलचक्कर नेपाली राष्ट्रवादको ढ्वांग पिटाइ हो ।कहिले विस्तारवादसंग मुकाबिला गर्न सुरुङयुद्द खन्ने र कहिले प्रचण्डको कारवाहीमा परेको बाबुरामको जीवन रक्षाको लागि साउथब्लकको त्वंशरणंमा जीवन दान माग्न ल्याप्चे धस्ने माओवादी, हर्दम भारतको निगाहमा सत्तादान माग्ने कांग्रेस र पश्चिमबंगालदेखि १० जनपथसम्मको चाकरीमा यता र उताको दिसा हराएको एमाले ; कसैले देखाएको क्रन्तिकारितामा कुनै दम छैन ।
सकिन्छ लडेर हराए हुन्छ वा उतै मिसाएर एउटा गोर्खे प्रान्त बनाए हुन्छ। हैनभने सहअस्तित्वमा बाँचेर छिमेकीसंग बढीभन्दा बढी फाइदा लिएर आफ्नो उन्नतिको बाटो खन्न जाने हाम्रो भलो छ।
के अष्ट्रिया र स्विटजरल्याण्डको भूपरिवेष्ठितपना उसको अभिषाप बनेको छ ? के ती युरोपेली मुलुकले जर्मनी र फ्रान्स वा इटालिको निगाहमा आँफूलाई मोहताज बनाएका छन् र ? छैनन्, बरू यो मानवीय चरित्र हो कि ऊ आँफू कमजोर र हुतिहारा बन्छ अनि आफ्नो किच्चडपनको कारण अरूको शरीरमा हिँडेको जुम्रामा खोज्छ । हामी नेपालीको अधोगतिको कारण हामि स्वयं हौँ , भारत र भारतीय होइनन् । उनीहरू कुनै विषयमा दोषी होलान तर हाम्रो कुन त्यो महानता छ जस्ले हाम्रो अस्मितालाई माथि उठाउन खोज्दा भारतीय बाधक बने ?
परस्परको सजिलो र अपनत्वको सम्बन्ध, असल र दृढ राजनैतिक इच्छाशक्ति बोकेका इमान्दार नेताहरू र ती नेताहरूलाई आधार दिने विश्वासिला र सकारात्मक उर्जायुक्त समर्थकहरूको जनउभार हुने हो भने देश अरूले बन्न नदिए पनि बन्न सक्छ ।
राजनितिक दूराग्रहको दुषित विषले दिमाग रंगिएकाहरू जब हिंस्रक पागलपनको नशामा जब आफ्ना दुर्गन्धित आक्रोसलाई राजनीतिक रंग दिएर त्यही अकाट्य सत्य हो भन्ने बनाउँदै राज्यतन्त्रमा कब्जा जमाउँछन्, अन्ध राष्ट्रवादको नारामा जनतालाई लठ्याएर आफ्नो स्वार्थको एजेण्डामात्र अगाडि सार्छन, त्यो मुलुक सद्दाम हुसेनको इराक बन्छ वा जनतालाई अन्नको सट्टा मिसाइलको परिकार खुवाउने उत्तर कोरिया बन्छ । त्यसैले भारतसंग हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तै हुनुपर्छ जुन हुन जरूरी छ , 'विस्तारवाद मूर्दावाद' भन्दै सात दिनमा सात पटक राकेश सूदको दरबार धाउने खालको भन्दा फरक ।
एक लब्य जि !
सप्पै नेपाली तपाईंको जस्ताइ सोच हुनु भएको भए १९५० को स न्धी को दोब्बर स न्धी गरी सक्या हुन्थियो भारत ले -----
मैले पोहोर साल माओवादि मन्त्रायणिलाइ भेट्ने मौका पाएको थिएँ । धेरै विषयमा धेरै कुरा भए तर उनले भनेको एउटा कुरा मनमा राम्रै सँग अड्कियो । उनले ढाँटेकि हुन या सत्य बोलेकि हुन त मलाइ थाहा भएन तर माओवादि सरकारले भारतलाइ साष्टाङ्ग दन्डवत गरेको त उसैको पुराना कुराको विपरित भएन र? भन्ने प्रश्न को उत्तरमा उनले के भनिन भने, नेपालको सरकारि लगायत धेरैजसो सेक्टरहरुमा भारतले मद्दत नगर्ने हो भने दुइ दिन भन्दा धान्न सकिन्न रे, आर्थिक मामिला मा । विकास र पुर्वाधारका कुरा त परै छाडौ । भोगे पछि थाहा भयो रे, त्यसैले खुलेर भारतको विरोध गर्न नसकेका रे ।
यदि कुरा यस्तै नै हो भने यो कुकुर भुकाइ नै गलत छ भनेर स्विकार गर्नु पर्ने हुन्छ र भारतको सहयोग आवस्यक छ भनेर भन्न सक्नु पर्छ । अनि निस्चत दुरि निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । दुरि को परिमाण कति भन्ने हामि नै रोज्ने हो । यो दुरि हेर्दा टाढा तर वास्तविकतामा भारत-निर्भर नेपाल अशान्त आक्रान्त छ भने उता दुरि निर्धारण नजिक गरेको भुटान शान्त छ । अहिले परिवेस हेर्दा हामिले वुद्धि पुर्यायोभने भुटान जति झुक्नुपर्ने पनि हुँदैन तर सरकारमा जाने हरेक जोगिको कान भारतले चिर्ने गरेको छ भने सरकार विरोधिहरु सधै भारतको अति-विरोध गर्ने गर्दछन । स्वतन्त्र स्वाधिन नेपालको लागि सरकार र सडकको विदेश नितिमा एकरुपता हुनु अति आवस्यक छ । क्रान्तिकारि सडक र नतमस्तक सरकार वा नेता हरु विचको विन्दु वमोजिमको छिमेक-निति निर्धारण नभए सम्म उक्त मन्त्रायणिले भोगेको यथार्थ सधैँ दोहोरिने छ ।
एकलब्य दाईको कुरामा मेरो पुरा सहमती छ | हो हामी आफु सप्रिनु भन्दा अरुलाई शंका गर्न र बिगार्न बढ़ी खप्पिस छौं | भारतले हेपो भनेर सधै बिग्री रहनु भन्दा दाईले भने झै सहअस्तित्वमा बाँचेर छिमेकीसंग बढीभन्दा बढी फाइदा लिएर आफ्नो उन्नतिको बाटो खन्न जानु हाम्रो लागी भलो छ।
तर शायद राष्ट्र बनाएर राष्ट्र बादी बन्नु भन्दा बिदेशी को बिरोध गरेर राष्ट्र बादी देखिनु बढ़ी सजिलो होला..| त्यसैले त सधै बिरोधी स्वर हरु मात्र सुनिन्छ...की कसो लुना दीजू ?
मैले त नेपोलियन दाईले भेटेको ति भारतीय साथीले नेपाली राष्ट्रीयता बिरुद्ध एक शब्द पनि बोलेको देखिन...
एक्काइसौं सताब्दी को यो प्रतिस्पर्धात्मक समय मा आत्मनिर्भर नभएर खाली परनीर्भर मात्र हुने अनि आफु मेहनत नगरेर दोष जती भारत लाई थुपार्ने बानी मा सुधार नभए सम्म न हामी नेपाली को जीवन स्तर माथि वढ्छ न त हाम्रो देश नै उंभो लाग्छ । भारत ले हेप्छ र दबाउंछ भन्ने सोच्नु भन्दा मेहनत र पेरिश्रम गर्ने र कसरी भारत, चाइना,अमेरिका र जापान भन्दा बढी अर्थीक प्रगती गर्न सक्छु भन्ने सोचाई राखे मात्र देश ले अर्थीक प्रगती गर्न सक्छ। आफु मेहेनत गर्न अल्छि गर्ने, competitive nahune, अनि अर्को ले हेप्यो भन्ने Inferiority complex राखुन्जेल सम्म कहिले पनि प्रगती हुँदैन । आफु मेहेनत चै नगर्ने, सधैं बन्द र हडताल गर्ने, नुन तेल लुगा सप्पै भारत बाटै आयत गर्नु पर्ने, सत्ता र सरकार पनि भारत ले नै टिकाइ दिनु पर्ने, काम गर्नु साटो दिन भरि चोक र बजार मा बसेर राजनीतिक भाषान र गफ मात्र छाट्ने गरुन्जेल हाम्रो नियती भनेको दिन भरी भारत लाई गाली गर्‍यो, रात परे पछि भारतीय च्यानल हेर्दै अनि भारतीय गीत गुनगुनाउदै सुत्ने बाहेक अरु केही हुन्न । अर्का ले हेप्यो भन्दै रुनु भन्दा नेता र जनता सबै काम गर्ने, ध्वंस नगर्ने, र मेहेनत गर्दै अघी बढे देश भारत भन्दा अगाडि बढ्छ । जनता बिबेकी र मेहनती भए देश को चिन्ता गर्नै पर्दैन देश आँफै सम्बृध्ह बन्छ । जनता को हात मा बन्दुक थमाइ दिएर र फोस्रो राष्ट्रबाद पढाएर जनता बिबेकी र मेहनती हुँदैनन, स्कुल पठाउनु पर्छ ।
मलाई यो सस्तो क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद सबै भन्दा फोस्रो लाग्छ । अब यसो भएको भए , यसो हुनथ्यो होला भन्ने मेटाफिजिकल डिबेटमा नजाऊँ किनभने यसरी केही निस्कर्षमा पुगिन्न । देश निर्माण, देशको अस्मिताको रक्षा र उन्नति आक्रोसमा निहित हुन्छ भन्ने मेरो सोच छैन र म त्यति ठूलो क्रान्तिकारी सोचको पछि छु जस्तो पनि लाग्दैन । तर मेरो सामान्य बुझाइ के हो भने, मेरो पल्ला घरको ठूलो , धनी र थुप्रै परिवारका सदस्य भएको छिमेकीसंग म कसरी मिलेर रहन सक्छु भन्ने खोज्नुमा मेरो त्यो छिमेकको बसाइ व्यवहारिक रूपमा सजिलो हुन्न र ? हैनभने ठुलै ग्याङ बनाएर उसको उठिबास बनाउन सक्नु पर्‍यो मैले र भोलिका चुनौतिरूलाई पनि त्यहि ढंगले फेस गर्न पर‍्यो क्यारे हैन र ?
कि त मेरो घरवास बेचेर म कतै मुभ गर्न पर्‍यो , तर देशको मामिलामा त यसो गर्न पनि सकिन्न नि ।
ल , भैहाल्यो म जस्तो सोचकाले २ टा १९५० का सन्धि गर्थ्यो रे , तपाईँको विकल्प पनि सुनौँ न, कस्तो हुन्थ्यो होला तपाईँको सोचले ल्याउने कुरा चाहिँ ।
मेरा भारतीय मित्र हाल अमेरीकामा बसोबास गर्छन र उनी अहिले अमेरीकी नागरीक भएका छन। खासमा धेरै भारतीले नेपाल हिन्दु राष्ट्र (थियो) भएकै कारण उनिहरुका छिमेकी देश बंगलादेश या पाकिस्तान भन्दा चासो लिंदा रहेछन। बेला बेलामा उनिहरुकै छिमेकीबाट आतंकबादी आक्रमण हुने तर नेपाल उत्तरमा शान्त रहेर भारतीयलाइ कहिल्यै दु:ख निदिने भएर नेपालीप्रती उनिहरुको स्नेह बढ्तानै हुने रहेछ। त्यसैले नेपाली घटनाक्रम सके सम्म नियाल्न प्रयास गर्ने रहेछन तर उनी मित्र जान्न उत्सुक भएर आफ्नो ज्ञान सच्चाउदै थिए।
२०४७ को संबिधान लेख्ने दमन नाथ ढुंगाना लतायतका मानिस राजाका ब्यक्ती नभएर पार्टीहरुले नै चुनेका थिए। त्यो संबिधान राजाले बनाएको भन्नु अहिले संबिधान दिल्लीमा बन्दैछ भन्ने हल्ला जस्तै हो।
साथीहरुले अहिले संक्रमणकाल छ भन्नुभयो तर यो माओबादीको लागी मात्र संक्रमणकाल हो। माओबादी जस्ता हतियार धारी जथ्था बिभिन्न राजनितीक रंग भरेर टोल टोलमा उदाएका छन। यिनीहरुलाइ न त पुलिसले नै केही गर्न सक्छन, न त यिनीहरु माओबादीसंग नै डराउन सक्छन, यो सबैले देखेको कुरा हो। जनताको जिबन माओबादी युद्दकालको जस्तै अझै पनि असुरक्षित छ, यो देखे भोगेको कुरा हो, नकार्न नै सकिदैन।
हामी भारतसंग जोरी खोजेर माथी जान सकिन्छ कि मिलेर माथी जान सकिन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। देशको स्वार्थ हेरेर जिबनस्थर उकाल्न जे गर्नुपर्छ त्यसको लागी पछाडी हट्नुहुदैन। भारत उन्नतीको बाटोमा बढ्दै छ, सके मद्दत लिने नभए पनि त्यसको सिको हामीले गर्ने हो । हामी आफै सबल बन्ने हो अरुलाइ दोष लगाउने होइन।
हिमाल पारीले भनेको "दिन भरि चोक र बजार मा बसेर राजनीतिक भाषान र गफ मात्र छाट्ने गरुन्जेल हाम्रो नियती भनेको दिन भरी भारत लाई गाली गर्‍यो, रात परे पछि भारतीय च्यानल हेर्दै अनि भारतीय गीत गुनगुनाउदै सुत्ने बाहेक अरु केही हुन्न ।" चाही दामी लाग्यो। नेपालीको नियाती त्यही नै छ।
अहिले पेट भर्न पाए भोलिको हाम्रा स न्तती हरु भा ड् मा जाउन !भोलिको नेपाल भा ड् मा जाबोस !
अहिले सम्म त भुटान बनाउन सकेको छैन , कोशीस जारी छ भारत को । चुप चाप पेट को मुख हेरेर समर्पण हुँदै गयौ भने निकट मै हाम्रो मुलुक को अस्तित्ब लाई भुटान बनाउछ भारतीय शासक ले ।
( तर त्यस्तो नहोला किनकी नेपाल को अस्तित्ब को लागि शाहीद बन्ने हरु को कमी छैन नेपाल मा -----)